Tantaran'ny orinasa - Chengdu Hemeikaieng Medical Equipment Co., Ltd.
Tamin’ny taona 2013 no nitsangana ny HMKN.Ny fiaraha-miasa amin’ireo hopitalim-panjakana madinika sy salantsalany ary hopitaly tsy miankina no tena asa lehibe, ary mpamatsy fitaovana ara-pitsaboana sy kojakoja ilaina.
Tamin'ny taona 2014 dia nanangana orinasa iray niara-niasa tamin'ny vondrona pharmaceutique fanta-daza ao an-toerana mba hiarahana mikaroka sy mamolavola, mifantina fitaovana ary manamboatra fitaovam-pitsaboana.
Tamin'ny taona 2015 dia nanangana sampana R&D manokana izahay hamolavola sy hamolavola vokatra.
Tamin'ny taona 2016 dia nandray anjara tamin'ny tolo-bidy ho an'ny fitaovana sy kojakoja ho an'ny hopitaly telo ambony, nanome fitaovana, fitaovana ary fitaovana fiarovana amin'ny famonoana otrikaretina.
Tamin'ny taona 2018 dia niara-niasa tamin'ny terminal fahatelo toy ny fivarotam-panafody sy toeram-pitsaboana mba hanomezana fitaovana ara-pitsaboana sy famonoana otrikaretina ary vokatra fiarovana.
Tamin'ny taona 2020 Noho ny fihanaky ny COVID-19 dia nanomboka nanome fanafody famonoana otrikaretina sy kojakoja miady amin'ny areti-mifindra izahay ho an'ny sekoly, akanin-jaza, sampan-draharaham-panjakana ary orinasa lehibe;nivelatra avy any ivelany mankany amin'ny aterineto ny raharaham-barotra any ivelany, samy amin'ny lafiny roa.